ओलीराजको अस्त्र आतंक – Media Kurakani
March 2nd, 2019 Rabi Raj Baral Opinion
खगेन्द्र संग्रौला –
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट्’ बोलको गीत झल्ला गीत हो। त्यसमा न कुनै वैचारिक गम्भीरता छ, न कलात्मक हिसाबले त्यो गतिलो छ। त्यस्तो झल्ला गीतमाथि त्यो स्तरमा प्रतिक्रिया हुनु भनेको डब्बल झल्लागिरी हो। ओली सरकारले त्यही गर्‍यो। सरकारका कुनै मन्त्रीले केहीभन्दा मलाई अन्यथा लाग्दैन। तर, प्रधानमन्त्री जब आफैं बोल्छन्, त्यो गम्भीर कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले एक पटक पत्रकार र बुद्धिजीवीलाई इंगित गर्दै ‘विचार गरेर बोल्नुस् रेकर्ड रहन्छ’ भने। त्यो भन्या के ? ‘विरोध गर्नेलाई तह लाइन्छ’ भनेको हो ?
पशुपति शर्माले गीतमा जे–जे भने त्यस्तो त सम्भवतः हजारौं पटक भनिएको छ। विद्वान्‌हरूले, प्राज्ञहरूले आफ्ना शास्त्रीय लेखमा शब्द फरक पारे होलान् तर अभिप्राय हजार पटक भनिएको छ। पशुपति नै किन समातिए त ? छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने शैली हो यो। ‘हामी यसो गर्न सक्छौं, हेर’ भनेको हो। पशुपति खासमा कायर हुन्। उनलाई तत्काल नाम चाहिने, दाम चाहिने, सेलिब्रिटी भइटोपल्नुपर्ने, सबैको हाइहाइ हुनुपर्ने तर साहस चाहिँ चुनदाम छैन। सहन केही नसक्ने रहेछन्। उनले गीत फिर्ता लिए तर उनले झिक्दा नझिक्दै अरू कयौंले सामाजिक सञ्जालमा राखिहाले।
सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेटलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको समग्र समाजलाई व्यवस्थित गर्ने हो। सभ्य र शिष्ट बनाउने हो। समग्र सामाजलाई सभ्य र शिष्ट बनाउने कसले हो ? देश दुनियाँको नियति परिवर्तन गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र प्रबुद्ध समुदायले गर्ने हो। त्यो भोलिको कुरा हो।
कसैले केही भन्नेबित्तिकै यसरी हल्ला गर्ने हो भने म त पागल भएर मरिसक्नुपथ्र्यो। संविधान निर्माण भइरहेको बेला म मधेसीको पक्षमा थिएँ। एकातिर संविधान निर्माण भइरहेको थियो र अर्कातिर आफ्नै नागरिक मरिरहेका थिए। म मधेसी नागरिकको समान अधिकारको पक्षमा उभिएको थिएँ। संविधान निर्माणको बाहुबली प्रक्रियासँग मेरा आपत्ति थिए। कमसे कम मलाई सय जनाले भने होलान्, ‘लैनचौरको पैसा कति पटक आउँछ ?’ मधेसीहरूमाथि अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेपछि धेरै मर्ने डर भएको हुनाले मधेसी आन्दोलनकारी नाकामा गए। नाका त हाम्राले बन्द गरेका हुन्। मोदी महाराज पछि धमिलो पानीमा माछा मार्न आइलागे।
मधेसका नागरिकको संवेदना, आकांक्षा र उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको पीडाप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न म मधेस गएँ। संयोगले आन्दोलनकारीहरू नाकामा गएका थिए। मेरो उछित्तो काटेर सामाजिक सञ्जालमा लेखियो, ‘पारि दरभंगामा गएर नेपालमा ढुंगा हान्ने ?’ सामान्य नागरिकले त यत्रो बेहोर्नुपर्छ भने, जसले राज्य चलाउँछ, जसको हातमा देशको पैसा, बन्दुक र कानुन छ, ऊ आलोचनाबाट डराउने ? राज्य चलाउनेलाई त दुनियाँले हेरिरहन्छन्। उनीहरूका हरेक कामकाज टिप्पणीका विषय बन्छन्, आलोचना र निन्दाका विषय हुन्छन्। तपाईं शासन पनि गर्ने अनि आलोचनाबाट डराउने ? हामीले यो ओलीराजलाई भन्नैपर्छ, ‘शासन नै गर्ने हो भने शासनमा दुराचार, भ्रष्टाचार र विलासिता हुन्छ। त्यसमाथि जनताले थुक्छ। त्यो सहने हो भने शासन गर, होइन भने वन पस।’
नकारात्मकताकै कुरा गर्ने हो भने ओलीभन्दा ठूलो नकारात्मक व्यक्ति यो देशमा अर्को छैन। ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा निस्केपछि हामीले राजतन्त्रविरुद्ध नारा लगायौं। रत्नपार्कमा निरंकुशताविरुद्ध नारा लगाएका हामीमाथि अश्रुग्यास बर्सिरहेको बेलामा ओली के गर्दै थिए ? नवनिर्मित कैलाशकुट भवनको कुर्सीमा बसेर उनी के भन्दै थिए ? गणतन्त्रको सपना देख्ने भनेको गोरुगाढा चढेर अमेरिका जाने हो। यसको मतलब ओली गणतन्त्रप्रति नकारात्मक थिए। संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षणप्रति सधैं नकारात्मक थिए। त्यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यका समग्रताप्रति ओलीभन्दा बढी नकारात्मक कोही पनि छैन। सकारात्मकमा रूपान्तरित हुनैपर्छ भने पहिला ओलीले हुनुपर्छ। प्रदेशलाई किन अधिकार नदिएको ? प्रदेशलाई संघीय शासनको गोटीका रूपमा किन राखेको ? यो सकारात्मक कुरा हो ? हरेक मानिसको एक–एक टिप्पणीमाथि बकबकाउँदै हिँडेको को हो ? त्यो सकारात्मक कुरा हो ? समस्याको जड ओलीको मनोवृत्ति र ओलीको जिब्रोमा छ। त्यो मनोवृत्तिलाई सकारात्मक पाटोमा रूपान्तरित गरियो भने, बकबकलाई व्यवस्थित गरियो भने यी सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छन्।
(अन्नपूर्ण फुर्सदका लागि रविराज बरालसँगको संवादमा आधारित)
पड्किन सक्छ ‘हाइड्रोजन बम’ »
« काँकडभिट्टामा सवालहरूको सम्मेलन